MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardVAS mm Archives - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Blacklist and Stop feature faqs mm
1. ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုကိုပယ်ဖျက်ခြင်း ဆိုတာဘာလဲ?
1414 အောက်ပါအချက်များကို ပေးပို့ပြီး အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
“ Stop” ” ဟု စာတို ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ထပ်ဆောင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို စစ်ဆေး၊ ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
“ Blacklist / BL” ဟု စာတိုပေးပို့ခြင်းဖြင့် ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို Blacklist ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
2. ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို တစ်ချိန်ထဲတွင် ပယ်ဖျက်လို့ရနိုင်ပါသလား?
ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို တစ်ချိန်ထဲတွင် ပယ်ဖျက်လို့ရနိုင်ပါသည်။
1> 1414 သို့ “ Stop” ဟုစာတို ပေးပို့ပါ။
2> ထို့နောက် သင်ရယူထားသော ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ဖော်ပြထားသည့်စာရင်း မှ သင် ပယ်ဖျက်လိုသော ဝန်ဆောင်မှုအား ရွေးချယ်ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
3. ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို Blacklist ပြုလုပ်လို့ရပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့။ သင် အနေဖြင့်ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကို blacklist ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
1414 သို့ “ BL” ဟု ပေးပို့ပြီးတာနဲ့ သင်လက်ရှိ ရယူထားသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် MPT ring tune မှလွဲ၍ တခြား ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ အားလုံးကို ရယူအသုံးပြုနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
4. ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို SMS မှတဆင့် Blacklist ပြုလုပ်ပါက လက်ရှိရယူထားသော ဝန်ဆောင်မှုများ အားလုံးပါ ပယ်ဖျက်သွားမည်လား?
Blacklist ပြုလုပ်ပါက လက်ရှိရယူထားသော ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံး မပယ်ဖျက်သွားနိုင်ပါ။ လက်ရှိရယူထား သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပယ်ဖျက်လိုပါက unsubscribe လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
5. ဖုန်းနံပါတ်က Blacklist ထဲရှိနေပါက တခြားဝန်ဆောင်မှုများကို ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ?
၁၀၆ သို့ခေါ်ဆို မေးမြန်း၍ အခြား ဝန်ဆောင်မှု အသစ်ကို ရယူနိုင်ပါသည်။
6.ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို Blacklist ပြုလုပ်ပါက လက်ရှိရယူထားသော ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကို ဆက်လက်အသုံးပြုရနိုင်မည်လား။?
ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကို blacklist ပြုလုပ်ပါက လက်ရှိရယူထားသော ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 31, 2020 Categories Info mm, VAS mm
Poh B mm
1. “ပို့ဘီ” ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာပါလဲ။
“ပို့ဘီ” သည် MPT သုံးစွဲသူအချင်းချင်း MPT ဝန်ဆောင်မှု(Package)များကို လက်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ MPT သုံးစွဲသူများသည် “ပို့ဘီ” ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးပြီး Data Carry Plus Pack၊ ပြောပီးရင်းပြော Voice Pack၊ ထောဘီ တို့ကို အခြားMPTဖုန်းများသို့ လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူများသည် ပုံမှန်အတိုင်း USSD Code များကို ရိုက်နှိပ်ကာ မိမိနှစ်သက်ရာ Package ကိုရွေးပြီး “လက်ဆောင်ပေးမည်” နေရာကိုရွေးချယ်ကာ မိမိပေးပို့လိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်သွင်းလိုက်ရုံဖြင့်လွယ်ကူစွာ လက်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
MPT 4U App ကို အသုံးပြုပြီးလည်း MPT ဝန်ဆောင်မှု (Package)များကို လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။
လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်မည့်အကြိမ်အရေအတွက် နှင့် လက်ဆောင်လက်ခံနိုင်မည့် အကြိမ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
လက်ခံရရှိသူသည် မိမိလက်ခံရရှိသော Package ကို ယင်းPackage ၏ လက်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
MPT ဝန်ဆောင်မှု (Package) USSD အခြား
သင်သည် “ပေးပို့သူ” ဖြစ်ပါက သင်ပေးပို့မည့်Package၏ ဈေးနှုန်းအတိုင်း ကျသင့်ငွေကိုသာ သင်၏ လက်ကျန်ငွေအတွင်းမှ ဖြတ်တောက်သွားပါမည်။ ပေးပို့မှုအောင်မြင်ကြောင်း SMS ပေးပို့အသိပေးပါမည်။
သင်သည် “လက်ခံရရှိသူ” ဖြစ်ပါက သင့်အားပေးပို့လိုက်သော Package ကိုအလိုအလျောက်လက်ခံ ရရှိပါမည်။ လက်ခံရရှိကြောင်း SMS ပေးပို့အသိပေးပါမည်။ သင်၏ package ကို *224# သို့ ခေါ်ဆိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
3. ကျွန်တော့်မှာ လက်ကျန် Data Carry Plus Pack ရှိနေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဆီကနေ Data Carry Plus Pack အသစ်တစ်ခုကို လက်ခံရရှိပါတယ်။ ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ?
လက်ကျန်နှင့် အသစ်ရရှိသော ဒေတာပမာဏများပေါင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး Data Cary Plus Package၏ လက်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
A Kyite Pyaw+ Voice Pack နှင့် Htaw B တို့သည်လည်း လက်ခံရရှိသူတွင် ရှိနေသည့် အမျိုးအစားတူ Package များနှင့် ပေါင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 27, 2020 ဩဂုတ် 27, 2020 Categories Balance mm, VAS mm